We She Me: Bad Habbit
Reader's Digest ကို ပို့ထားတဲ့ ကိုယ်တိုင်ရေး Joke တစ်ခုပါ။ သူတို့ဆီက ဘာမှ ပြန်မကြားတာနဲ့ ကိုယ့်ဘလော့ပေါ်ပဲ ပြန်တင်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော် ရေးပြီး သူမနာမည်နဲ့ ပို့ထားတာပါ။
My hubby hasahabit of falling asleep on couch after few minutes of turning TV on. I always have to switch off the light after he has used bathroom. There have been several cases he parks our car leaving headlight on. We often have to jump-start our car with nearby ones. I'm quite unhappy with his habit of turning it on and leaving it on.
Being me on the list is the worst.
တခြားဟာသများ - Jokes
khin oo may - 5/14/10, 5:02 PM
တီဗွီဖွင့်ပြီါ်ရင်းအိပ်ပျော်သွားလေ့ရှိတယ်။ ပိတ်ပေးရတယ်သူအိမ်သာကိုသုံးပြီးတိုင်းမီးကို။ကားမီးတွေဖွင့်ပြီးထားခဲ့တယ်။ကိုယ်တို့ရဲ့ကားနဲ့တစ်ခြားကားကိုပေါင်းပြီး စက်နှိူးရတယ်။ ငါမပျော်ဘူး.သူ့အကျင့်ဖွင့်တာရယ်ထားပြစ်ခဲ့တာရယ်။
အဲဒီလစ်စ်က ဆိုးတယ် ငါ့အပေါ်မှာ..
Ko Boyz - 5/14/10, 5:11 PM
Anonymous - 5/14/10, 5:19 PM
lol.. Turning it on and leaving it on. :D
Sandakuu - 5/14/10, 5:54 PM
ကိုယ်လုပ်ချင်ရင် ကိုယ်ကစ လုပ်ပီး ကိုယ်စိတ်ကျေနပ်ရင် ဘာဖြစ်နေနေဆိုပီး ဂရုမစိုက်တော့တာ ကိုပြောချင်တာလားမသိ။
အိမ်မှာ ပါးပါး ဟင်းချင်ချင်ထချက်တာဘဲ..ဟင်းတွေချက်ပီး ကျက်ရင် ဗြောင်းဆန်းအောင်မီးဖိုချောင်ဒီတိုင်းထားခဲ့တာ.. နောက်ကလိုက်ရှင်းရတဲ့မာမီက ခဏခဏပွစိ ပွစိလုပ်တယ်.. အဲလိုမျိုးလား..
Anonymous - 5/14/10, 6:05 PM
don't understand, what you want to say.
Anonymous - 5/14/10, 6:09 PM
Think of what does it means "turning it on and leaving it on"
Anonymous - 5/14/10, 7:23 PM
ဘာကို ဆိုလိုချင်မှန်းမသိပါ။ ရီစရာလို့ ခေါင်းစဉ်မှာ ရေးထားလို့ သာ ရီစရာရေးထားမှန်း ခန့်မှန်းမိပါတယ်။
Anonymous - 5/14/10, 7:38 PM
To KOM and others:
တော်တော်ထုံတာပဲ... နိုင်ငံခြားမှာနေတဲ့ အိမ်ထောင်သယ်တွေဖြစ်ပြီး "turning it on and leaving it on" တောင် နားမလည်ဘူး
Andy Myint - 5/14/10, 11:00 PM
စာရေးတာ လိုလို့ ဖြစ်မှာပါဗျာ.. ပြောကြပါစေလား...
Anonymous - 5/14/10, 11:14 PM
Anonymous - 5/15/10, 3:17 AM
အော်.... Anonymous - 5/14/10 7:38 PM ပြောမှပဲ သတိထားမိတယ်။
18+ ဟာသ သဘောမျိုးပေါ့။ အင်း ပေါက်သွားပီ ပေါက်သွားပီ ။
ZT - 5/15/10, 3:44 AM
အဟဲ။ ကျွန်တော်တော့ ပေါက်တယ်။ ကိုအင်န်ဒီ R16 Rate ဖို့ကောင်းတယ်။ :D
Anonymous - 5/15/10, 5:43 AM
Then, You could play with yourself.
Anonymous - 5/15/10, 11:49 AM
Just wonder you include the following sentence purposely or not :P
"We often have to jump-start our car with nearby ones."
ချစ်ကြည်အေး - 5/15/10, 2:30 PM
ကိုအန်ဒီ ပေးချင်တဲ့ ဟာသရဲ့ အချုပ်က ဒီ ဝါကျမှာပေါ့....
အင်း ရလိုက်တယ် ဟားဟား....:)
Anonymous - 5/15/10, 3:16 PM
TZA - 5/15/10, 3:37 PM
ဟားဟား.. မဒမ်အန်ဒီ ကိုယ်တိုင်ရေးရင်ပိုရီရမယ်ဗျ.. :p
ကိုဇေယျာ - 5/16/10, 3:20 PM
ဟားဟားဟား ... သဘောကျသဗျာ
Anonymous - 5/16/10, 9:25 PM
T T Sweet - 5/17/10, 11:30 AM
ဟုတ်တယ် ... ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ပုံရတယ် ... သူမကိုမေးကြည့်ရမယ် ...
Anonymous - 5/18/10, 1:26 AM
ha ha ha... what ever u got2cute baby :)
Anonymous - 5/18/10, 7:11 PM
Sorry Ko Andy, doesn't mean to hurt you. may be I don't understand 16+ rate jokes.
ဂျာမုန်းဒန် - 5/18/10, 8:03 PM
တခါတလေ ဟာသဆိုပြီးရေးတဲ့စာကြောင်းဟာ ရီဖို့မကောင်းရင် အဲဒါမှပိုပြီးရီစရာကောင်းတယ်။
Anonymous - 5/19/10, 1:25 PM
ဟိုဖက်ကို တော်တော်စိတ်အားထက်သန်ပုံ ရတယ်။ အဟက်ဟဲ။ ဘွာတေး ဘွာတေး။ ခလေးတွေ ကြားသွားအုံးမယ်။
Wai Pyo - 5/24/10, 6:02 PM
၃ ခေါက်ပြန်ဖတ် ပြီး ပြုံးသွားပါတယ်။
လူကြီးဟာသ မို့လို့ RD ကလက်မခံတာ ထင်တယ်ခင်ဗျ။
ဒီလို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ရေးတတ်တာ သဘောကျတယ်။